त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ७५ विद्यार्थीको बिचल्ली : जहाज कि मौसम खराब ? « News24 : Premium News Channel
त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ७५ विद्यार्थीको बिचल्ली : जहाज कि मौसम खराब ?
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) बिहान ७५ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि नेपाल एयरलाइन्समार्फत अष्ट्रेलिया जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगे । टिकट, भिसा देखाएर विमानस्थलभित्र प्रवेश गरेका उनीहरुले उडान समय पर्खिएर बसे । तर, उडान भएन ।
शुक्रबार अष्ट्रेलियाका लागि मात्र नभई साउदी, मलेसियालगायत देशको उडान पनि प्रभावित बनेको थियो । र, यात्रुहरु बिचल्लीमा परेका थिए ।
उडान समयमै नभएपछि विद्यार्थीहरुले त्यसबारे सूचना र जानकारी लिँदा जहाजमा समस्या आएपछि उडान ढिलाई भएको सूचना पाएकाे बताएका छन् । यसरी उडान समयमा नहुँदा झोला, लगेजसहित पुगेका उनीहरु बिचल्लीमा परे ।
यसअघि पटक पटक प्राविधिक समस्याका कारण जहाज दुर्घटना र उडान प्रभावित भएको समाचारहरु आएकै हो । र, शुक्रबार बिहान पनि यस्तै भइदियो ।
खासमा के भएको थियो र ७५ जना विद्यार्थीहरु एयरपोर्टमै बिचल्लीमा पर्नुपर्यो ? यसबारे न्युज २४ नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयकी सूचना अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमलाई सम्पर्क गर्दा उनले सुरुमा आफू अनभिज्ञ रहेको र बुझेर जानकारी दिने बताइन् ।
पछि न्युज २४ नेपालसँग सम्पर्कमा आएकी सूचना अधिकारी गौतमले खराब मौसमका कारण उडान प्रभावित भएको र समय तालिका (सेड्युल) मिलाएर विद्यार्थीहरुलाई पठाइने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मौसम खराबीका कारण फ्लाइट डिले भएको हो । टेक्निकल खराबी पनि भएको हुनसक्ला तर, विशेषचाहिँ मौसम खराबीका कारण हो । त्यसो त शुक्रबार अष्ट्रेलियामात्र नभई साउदी मलेसियालगायतका उडान पनि रद्द भएको छ । डिले भएका उडानहरुमौसममा सुधार आएपछि सिफ्ट मिलाएर उडान गरिनेछ ।’
विगत तीन दिनदेखि मौमसमा आएको खराबीका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु प्रभावित बनेको पनि उनले बताइन् ।
तस्वीर सौजन्य : सुजन लामिछाने